Kuthiwani ukuba kufuneka ndisirhoxise isicelo sam ngenxa yemeko yongxamiseko evelayo okanye engenakuphepheka? - Indawo Yoncedo yeAirbnb
Kuthiwani ukuba kufuneka ndisirhoxise isicelo sam ngenxa yemeko yongxamiseko evelayo okanye engenakuphepheka?
Nceda uqaphele: Eli nqaku alithethi ngeemeko ezinento yokwenza nobhubhane oyi-coronavirus (COVID-19). Hlola inqaku lethu elithetha ngeemeko ongenakuzinceda zeCOVID-19 ukuze ufunde ngeemeko ezinento yokwenza neCOVID-19, ingakumbi imali ebuyiswayo nengabuyiswayo ngokubhukish okwenziwe emva kukaMatshi 14, 2020.
Sisenokukubuyisela imali yakho okanye singakohlwayi ngokurhoxa kwakhoukuba kufuneka urhoxe ngenxa yemeko engalindelekanga engaphaya kwamandla akho. Apha ngezantsi kudweliswe iimeko ethetha ngazo Ipolisi Yethu Yeemeko Ongenakuzinceda. Ngaphambi kokuba urhoxe, jonga ukuba imeko yakho ifakiwe na kuluhlu olungezantsi nokuba ungakwazi na ukunikezela ngamaxwebhu afunekayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba ukurhoxa ngaphandle kokohlwaywa kufumaneka kuphela xa kukho iimeko ongenakuzinceda ezenzeke ngaphambi kosuku obhukishele ukungena ngalo. Ukongeza, Ipolisi Yethu Yeemeko Ongenakuzinceda ayisebenzi xa kubhukishwe iLuxe okanye iLuxury Retreats, kuba zona zingena Kwipolisi yeLuxe Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe.
Ukufa kombuki zindwendwe, kondwendwe, okanye komntu oncedisa ekubukeni iindwendwe, kondwendwe olongezelelekileyo, kwelungu lentsapho elikufuphi, okanye komntu onyamekela umntu ogulayo. Uza kucelwa ukuba uveze elinye lala maxwebhu:
Amanqaku akumaphepha-ndaba athetha ngomfi
Ukugula ngamandla nangesiquphe okanye ukonzakala okuchaphazela umbuki zindwendwe okanye umntu oseluhambeni. Uza kucelwa ukuba uveze ingxelo kagqirha eqinisekisa ukuba loo mntu akanako ukubuka iindwendwe okanye ukuhamba ngenxa yokugula kakhulu ngokungalindelekanga okanye yokonzakala. Loo ngxelo ikwamele ibhalwe umhla osemva kokubhukisha ize ingeniswe zingaphelanga iintsuku eziyi-14 emva kokuba kurhoxiwe. Okwangoku, iimeko zangaphambili ebezisaziwa ngulo mntu ngexesha lokubhukisha kwakhe aziqukwanga kwiPolisi Yeemeko Ongenakuzinceda.
Izinto ezigunyaziswe nguRhulumente kuquka umsebenzi wokugweba, izithintelo zokuhamba, ukuvela enkundleni, kunye nokuthunyelwa emkhosini. Uza kucelwa ukuba uveze ikopi esemthethweni enomhla olandela owokubhukishwa kwendawo, kuquka igama lomntu oza kweza loo nto ifunwa ngurhulmente.
Ubungqina obubonisa ukuba ingxaki iye yalungiswa
I-invoyisi ebonisa ukuba ilungisiwe
Ukuphazamiseka kwezothutho okwenza ungakwazi ukuya kwindawo ofuna ukuya kuyo, kuquka ukuvalwa kweendlela nokurhoxiswa kweenqwelo-moya apho kungekho enye indlela yokuhamba. Oku kuquka ukuvalwa nokurhoxisa okubangelwe ziintlekele zemvelo, ezinjengeenyikima okanye izaqhwithi. Uza kucelwa ukuba unikezele ngesaziso sokuvalwa kwendlela, okanye amaxwebhu avela kwinkampani yenqwelo-moya erhoxisiweyo uze uveze namaxwebhu angqina ukuba awunakukwazi ukuhamba uye kwindawo oya kuyo.
Ukurhoxiswa kohambo ngololiwe, ngebhasi, okanye ngenqanawa xa zingekho ezinye iindlela zokuhamba ngolo suku. Uza kucelwa ukuba uveze amaxwebhu abonisa ngokucacileyo ukuba umntu onale ntsholongwane ebengasebenzi ngaloo mini. Mhlawumbi ungenza ikopi yewebhusayithi yenkampani okanye eyelinki enengxelo esemthethweni evela kuloo mntu onentsholongwane.
Akukho zinkcukacha ziza kufunwa kwezi meko, kodwa iqela lethu liza kuhlola imeko nganye ukuze liqinisekise ukuba uchaphazelekile nyhani na.
Iintlekele zemvelo, ubugrogrisi, kunye nokungazinzi koluntu/kwezopolitiko ezithintela undwendwe ukuba lungakwazi ukuya okanye ukubuya endaweni ethile, okanye ezibangela kube nzima ngombuki zindwendwe ukwamkela iindwendwe.
Ubhubhane wesifo okanye ukugula okuchaphazela ngesiquphe indawo okanye iqela lonke labantu. Oku akuziquki izigulo ezisele zikho kwingingqi ethile—ngokomzekelo, imalariya eThailand okanye idengue fever eHawaii. Naluphi na utshintsho olwenziwayo kwipolisi yethu ngokuqhambuka kwesifo, kunye nezinto esebenza kuzo ipolisi, luza kwenziwa ngokusekelwe kwizaziso zoMbutho Wezempilo Wehlabathi kunye nabasemagunyeni basekuhlaleni.
Izithintelo zokuhamba ezibekwa ngurhulumente, ngamagosa ezomthetho, okanye ngumkhosi othintela ukuya okanye ukubuya kwindlu okanye kwindawo ebinento enokonwatyelwa.
Amacebiso ngokhuselekoasebenza kwindawo ekuyo indlu okanye kwinto enokonwatyelwa okanye kwindawo ebezinepati kuyo iindwendwe.
Ukwenziwa kotshintsho kwivisa okanye kwipasipoti olwenza ukuba kungakwazeki ukuhamba kuyiwe kuloo ndawo. Oku awakuquki amaxwebhu okuhamba alahlekileyo okanye aphelelwe lixesha.